रेखा थापाको भिडियो क्लिप सेयर गर्दै कमल थापाले भने– हाहाहा, नो कमेन्ट « Nepal Page
काठमाडौं, १७ मंसिर । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले अभिनेत्री रेखा थापा गणतन्त्रको पक्षधर भएको टिप्पणी गरेका छन् । राप्रपाको निर्वाचनमा थापाले महिला कोटाबाट केन्द्रीय महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएपछि थापाले रेखा गणतन्त्रवादी भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
रंग पत्रकार प्रकाश सुवेदीसँगको पुरानो अन्तरवार्ताको क्लिप शेयर गर्दै थापाले भनेका छन्, ‘हाहाहा, नो कमेन्ट ।’
सुवेदीले थापालाई प्रश्न गर्छन्–राजतन्त्र कि गणतन्त्र ?
जवाफमा थापाले ‘गणतन्त्र’ भन्छिन् ।
‘तपाईँ अहिले कुन पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ ?
राप्रपाको उद्देश्य के हो थाहा छ, यहाँलाई ?
थाहा छ १ मैले आम जनताको भाषा बोलिरहेको छु । पार्टीको सिद्धान्त र विचार आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । पार्टीकै सिद्धान्तमा कतिपय मानिसहरुमा त्यो चिज चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ । त्यो पछि ब्याख्या गरौँला।।।।’
सुवेदीले फेरि सोध्छन्–यसो बोल्दा तपाईँलाई पार्टीले कारबाही गर्दैन?
राप्रपा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेको पार्टी भएपनि रेखाले गणतन्त्रको वकालत गरेको र उनलाई महामन्त्रीमा जिताउन नहुने आशय थापामा देखिन्छ । राप्रपाकै कतिपय नेताहरुले भने कुनै एक सन्दर्भको पुरानो भिडियोलाई थापाले चुनावी अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् ।
गणतान्त्रिक संविधान उल्ट्याउन प्रतिगामी हमला बढ्यो– राजनीतिक प्रतिवेदन
काठमाडौं, ११ पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतान्त्रिक संविधान लगायतका उपलब्धीहरु उल्ट्याउन हमला भइरहेको दाबी गरेका छन् ।आइतबार केन्द्रीय समिति
काठमाडौं, ११ पुस । भन्सार विभागले लिने भन्सार एजेन्टको परीक्षा तत्काल लिन परीक्षार्थीले माग गरेका
साइकलको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु
मलङ्गवा, ११ पुस । साइकलको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, ११ पुस । पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाडी तथा
महाधिवेशन उद्घाटनमा माओवादी केन्द्रले बोलायो ११ पार्टीलाई, एमाले पनि छुटाएन
काठमाडौं, ११ पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन आज (आइतबार) काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ।
प्रधानन्यायाधीशको धनबारे बृहत् नागरिक आन्दोलनले आज सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको ध्यानाकर्षण गराउने
काठमाडौं, ११ पुस । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति विवरण जाँचबुझ गर्न डा। गोविन्द केसीको अगुवाइमा
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन : गृहमन्त्री खाँण
गोरखा, १० पुस । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता
आफ्नो मान्छे नेपाल टेलिकमको प्रमुख बनाउन रातारात बदलियो निर्देशिका
काठमाडौं, १० पुस । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि अघि बढेको
पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेः ऊर्जामन्त्री भुसाल
काठमाडौँ, ९ पुस । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र